Virgin Holidays Xeerarka kuubanka
Ku keydi 10% Iibinta Fasaxyada Xagaaga ee Virgin Ka saar dhibka qorshaynta fasaxaaga xiga adiga oo dooranaya Fasaxyada Bikrada ah si aad u noqoto goobta safarkaaga joogsi ee duullimaadyada waaweyn iyo baakadaha fasaxa. Fasaxyada Virgin waxay bixiyaan duulimaadyo, safarro, dalxiisyo, hoteello iyo baakadaha meelaha ugu kulul ee fasaxa adduunka. U safr qaarad kasta oo isu diyaari inaad iska hubiso oo nasato.
Fasaxyada Xagaaga ee Virgin Xiliga Xagaaga Iib- 10% Off Off Weekend Kuubannada Fasaxyada Ciidaha ee 2021. Ka hel lambarka foojarka Fasaxyada Fasaxa, koodhka xayeysiinta iyo dalabyada dhimista ee CouponsKiss. Soo hel koodhka foojarka Fasaxyada Virgin si aad u keydiso lacagtaada. Adeegso koodh kuuboon fasaxyada Virgin Holidays si aad u hesho 20% Off on xirmada dalxiisyada heshiisyada fasaxa. La wadaag koodhka xayeysiinta ee Ciidaha Virgin code iyo koodh dhimis saaxiibbadaada facebook, twitter, pinterest ...
Kaydso 10% Iyada oo Helitaanka Qolka Madaarka lagu daray! CouponAnnie ayaa kaa caawin karta inaad keydiso mahadnaq weyn 15 heshiisyo firfircoon oo ku saabsan Ciidaha Bikrada. Hadda waxaa jira 2 koodh, 13 heshiis, iyo 2 heshiis geyn bilaash ah. Iyada oo sicir -dhimis celcelis ahaan ah 19% dhimis, macaamiishu waxay kor u qaadi karaan heshiisyo aan caadi ahayn ilaa 30% dhimis. Heshiiska ugu wanaagsan ee hadda la heli karo wuxuu 30% ka dhimanyahay “Xeerarka Kuubannada Fasaxyada ee Virgin iyo Heshiisyada Xayeysiinta ee 2021”.